Somary mangingina: tsy malaza loatra ny hetsika faran’ny taona | NewsMada
Somary mangingina: tsy malaza loatra ny hetsika faran’ny taona
Folo andro eo ho eo sisa, hivalona ny taona 2018. Raha oharina amin’ny zava-nisy tamin’ireo taona vitsivitsy teo aloha, somary nangingina kokoa ny hetsika kolontsaina mamarana ity taona ity. Nisy ny mpanakanto hanafana ny lanonan’ny faran’ny taona any ivelan’i Madagasikara, saingy vitsy ihany izy ireny.
… Ho an’ny mpanakanto efa manana ny lazany io tranga io fa somary mifanohitra kely amin’izay kosa ny an’ny mpanakanto tsy mbola fantatra loatra. Nitombo isa ireo toerana fanaovan-danonana, indrindra fa any amin’ny tanàn-dehibe sy ny toerana tsy lavitra azy. Saika ahitana « espace » avokoa ireo tanàna lehibe lalovan’ny lalam-pirenena. Tsy vitsy amin’ireo manan-talenta ny manafana ireny toerana ireny.
Raha ny fanadihadiana natao, misy amin’ireny tarika manafana lanonan’ny faran’ny taona ireny aza no niorina na nitambatra vao haingana. Nampiraisin’ny talenta sy ny traikefa ka mora sy tsy manano sarotra loatra intsony ny fanatanterahana fanafanana ny sehatra. Anisan’ny tsikaritra nandritra ny fanadihadiana ihany koa ny kajikajy fanao amin’ny fiarahana manafana sehatra amin’ny vanim-potoana tahaka itony. Olona vitsy ny eny an-tsehatra kanefa mahavitra karazan-javatra maro. Ohatra, sady mpihira no mpitendry no mpanentana, sns.